कस्तो होला एनआरएन- आइसीसीको उत्तरअमेरीकी... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
कस्तो होला एनआरएन- आइसीसीको उत्तरअमेरीकी विज्ञ भेला?
आगामी जुन १६ र १७ गते अमेरिकाको स्यानफ्र्यान्सिसको सहरमा हुने गैर आवासीय नेपाली संघ, अमेरिकाको पहिलो वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएन-आइसीसी) ले पहिलो पटक उत्तर अमेरिका क्षेत्रका नेपाली विज्ञ डायस्पोराको एउटा ‘विज्ञ भेला’ भेला गर्दैछ।
विज्ञ भेला केही समय पहिला टेक्सासमा गर्ने भनिए पनि सहभागी हुने र छलफल गर्न पाइने अवसरको साथै समय ,अनी स्रोत साधनको समेत बचत हुनाले एनआरएन अमेरिकाको एजीएम र विज्ञ भेला एकै समयमा गर्न लागिएको हो।
एनआरएन- आइसीसीले विश्वभरका विभिन्न सहरमा बिभिन्न समयमा यस्तो भेलाको आयोजना गर्दैछ। ती क्षेत्रहरूको भेलाले अनुमोदन गरेको कार्यपत्रलाई आगामी अक्टोबरमा नेपालमा हुने ग्लोबल विज्ञ भेलामा प्रस्तुत हुनेछ। यही कुरा अहिले बाहिर आएका छन्।
विज्ञ भेलामा को सहभागी हुने?
बिज्ञ भन्ने बित्तिकै कहिले काहीँ धेरै प्रश्न उब्जने गर्छन्। को होला त बिज्ञ? बिज्ञहरूको भेलामा सहभागी हुन चाहिने आवश्यक योग्यता कति होला? बिज्ञ हुनलाई के चाहिन्छ? पीएचडी?, मास्टर्स? अथवा कुनै शैक्षिक योग्यता?
सहज रुपमा उत्तर दीने हो भने कुनै एउटा बिषयमा बिज्ञता हाशिल गरेको ब्यक्ति अर्को बिषयमा बिज्ञ नहुन पनि सक्छ। एउटा विषयमा पीएचडी गरेको ब्यक्ति अर्को कुनै विषयमा उसलाई त्यति थाहा नहुन पनि सक्छ।
कुन विधाको बिज्ञ हो भनियो भने अलि सहज बनाउँछ उत्तर दिन। त्यसले केही भए पनि प्रष्ट्र हुन्छ।
कुनै बिज्ञ कार्यक्रममा सहभागी हुँदैमा बिज्ञ हुने र नहुँदैमा बिज्ञ नहुने भन्ने पनि छैन। जसले सम्बन्धीत विषयमा अध्यन गरेको छ, त्यसलाई बिभिन्न तरिकाबाट सोच्न सक्छ, जसले सम्बन्धीत विषयको नयाँ तरीकाको प्रयोग गर्न आफ्नो धारणा राख्न सक्छ, समाजमा आधुनिकीकरणप्रती टेवा पुर्‍याउने खालको सुझाव अनि विचार दिन सक्छ। अनि समस्याको सही पहिचान गर्न सक्छ त्यो नै बिज्ञ हो।
अथवा ऊ त्यो सम्बन्धीत विषयको बिज्ञ हो। यसैले विज्ञ भेलामा नेपाल र नेपालीप्रती माया गर्ने, सम्बन्धीत विषयमा आफ्नो धारणा गर्ने सबै व्यक्तित्त्व अटाउन सक्ने हुन्छ।
बिज्ञ भेलामा छलफलको विषय के होला?
एनआरएन- आइ सी सीले विज्ञ भेलामा एनआरएनए भिजन २०२० एण्ड बियोण्ड’ भन्ने कार्यपत्रमा आधारीत भई नेपालभन्दा बाहिर बसेका बिभिन्न विषयमा अनुसन्धान गरेका र सम्बन्धीत विषयमा नेपालको उन्नती, नेपालको स्रोत साधनसँग सम्बन्धीत भई आफूले आर्जन गरेको सिप, ज्ञानलाई विभिन्न तहमा छलफल र परिमार्जन गर्दै नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने, र विभिन्न संस्थामार्फत कार्यान्वयन गराउन सहयोग पुग्ने गरी भूमिका खेल्ने योजना बनाएको देखिन्छ।
यसैलाई महत्त्व दिएर एनआरएन- आइसीसीले योजनासँग सम्बन्धीत कमिटी बनाउँदै अगाडि बढेको देखिन्छ। जसको एउटा उदाहरण नेपाल पोलीसी इन्स्टिच्यूट पनि हो।
बिज्ञ भेलामा केही विषयहरू जस्तै नेपालमा हाइड्रोपावरको विकास, टुरिजम, कृषि, टेक्नोलोजी, औधोगिक विकाजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएर एनआरएन- आइ सी सीले कार्यपत्र बनाउन जोड दिए पनि आवश्यकता र महत्त्वपूर्ण विषयमा कुनै नयाँ योजनाका साथ कार्यपत्रहरु आउँछ र छलफल हुन्छ भने त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ।
कार्यपत्र कसले र कसरी तयार पार्दै छन्?
हुनत अहिलेसम्म क्यालिफोर्नियाको स्यानफ्र्यान्सिसको शहरमा हुने विज्ञ भेलाका लागि अनौपचारीक रुपमा छलफल भए पनि औपचारीक रुपमा कार्यपत्र तयार गर्न कसैलाई जिम्मेवारी दिएको छैन।
तर बिभिन्न तरिकाबाट छलफल र तयारी भइरहेका छन्। म आफैं पनि बिभिन्न समयमा यो कार्यक्रमलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने कन्फेरेन्स कल मिटिङ, एनआरएन- आइसीसीका उत्तर अमेरिकामा र विश्व भर रहेका सामाजिक अभियन्तासँग छलफलमै छु।
कार्यपत्रहरु कसले प्रस्तुत गर्दै छ होला? को विज्ञ प्यानलमा पर्दै हुनुहुन्छ? अथवा को-को विज्ञ स्यानफ्र्यान्सिसको जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने जिज्ञाशा आएका छन्।
विभिन्न विषयका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, सामाजिक कार्यमा विज्ञसँग अनौपचारिक कुराहरु भए पनि विज्ञ भेलामा अमेरिकाका सम्पूर्ण सदस्यहरु सहभागी हुनुपर्छ। उनीहरूले नेपालको विकासमा कस्तो खाले मोडेल तयार पर्ने भन्ने विषयको छलफलमा सहभागी हुनेछन् र आफ्नो धारणा राख्नेछन्।
अमेरिकामा रहेका सामाजिक संस्थाको तर्फबाट आफ्नो संस्थाका सम्बन्धीत सदस्यको सुझावमा कुनै विषयमा कार्यपत्र पेश गर्न खुला हुनेछ।
सार्वजनिक रुपमा कार्यपत्रको बारेमा आब्हान भएपछि म आफैं यो प्यानलमा बस्न तयार छु र आफ्नो रिपोर्ट ,आफ्नो सुझाब दिन इच्छुक छु भनेर अगाडि आउनुपर्ने देखिन्छ।
अमेरिकामा रहेका सबैको सहभागीतामा देशले खोजेको प्रश्नको उत्तर दिएर यो नर्थ अमेरिकाको विज्ञ भेला सम्पन्न हुनेछ। यही नै हाम्रो आशा छ।
लेखक- एडभाइजर, एनआरएनए अमेरिका, एनआरएन- आइसीसी नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट कमिटी सदस्य हुन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३, २०७५, ०९:५९:३२
इजरायली प्रधानमन्त्री र ट्रम्पबीच भेटवार्ता